Ingxelo entsha isezantsi kwintengiso ye-iPad | IPhone iindaba
Ixesha elitsha lonke eliphantsi kwiintengiso ze-iPad
UAlvaro Fuentes | | iPad, iPad Pro, Izaziso
Ngokwolwazi lwamva nje, iApple ikulungele ukumilisela iPad Pro entsha kwisiqingatha sokuqala sika-2017. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi oku akunakwanela ukunqanda ukuhla kwemfuno yethebhulethi ka-Apple, ewela kwelona nqanaba lisezantsi. indlela entsha ephantsi ngalo lonke ixesha, itsho ingxelo entsha esele ivele.
Icaphula imithombo yokuthenga, olu lwazi luthi imfuno yeetshipsi ze-iPad iqhubekile nokuhla, oko kuthetha ukuba ukuthunyelwa kwezixhobo ze-iPad zango-2016 kungasokola ukufikelela kwizigidi ezingama-40 zizonke. Kodwa ayipheleli apho, imeko ayibi kwaye inokuba mandundu ngakumbi.
Ukwehla kwebango leetshipsi ziindaba ezimbi, ngakumbi ngexesha leholide xa i-iPad ibisoloko ingumthengisi ophambili weApple, njengoko kungqinwa yile yokuba kwiminyaka edlulileyo ibiyimpumelelo enkulu ngexesha leeholide zale mihla apho ezinye iminyaka, i-iPad ithengisiwe ngomzuzwana.
Ngokwengxelo entsha, epapashwe ngu Digitimes (ngelixa benembali engeyiyo yamahemuhemu xa kufikwa kwiimveliso, ulwazi luye luchane ngokuchanekileyo xa bebanga ukuba luvela kwimithombo yonikezelo), akunakulindeleka ukuba ubone ukukhula kwi-odolo yeetshiphusi zika-Apple de Ngo-2018, xa beza kuphehlelela iimveliso ezintsha.
Oku kuyahambelana nomhlalutyi we-KGI uMing-Chi Kuo (osoloko enolwazi malunga neApple) ebephawula mva nje. U-Kuo ucebise ukuba ukuthunyelwa kuya kulahla i-10 ukuya kwi-20 yepesenti ngonyaka kwi-2017 kwaye izixhobo ezitsha akunakulindeleka ukuba zibenenjini enkulu yokukhula kule ndawo. Ikwatsho ukuba iApple iyakwazisa "utshintsho" kwi-iPad ngo-2018, kubandakanya nokwamkelwa kweepaneli ze-AMOLED. Isizukulwana esilandelayo se-iPads (ezingezizo ii-AMOLED) kulindeleke ukuba zibhengezwe ngo-Matshi 2017.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPad » Ixesha elitsha lonke eliphantsi kwiintengiso ze-iPad
Ngayiphi na imeko, ukusetyenziswa kwezikrini ze-OLED akunakuchazwa njengo "kuguquka". Iimpawu ezininzi bezisebenzisa iminyaka.
I-Apple inokuba iyatshisa iicartridge zayo zokugqibela: ngoku isenokwazisa "uphuculo" njengokuvumela ukuqhuba kwe-USB, amakhadi e-SD, okanye ukuphinda uqalise unxibelelwano lwangaphandle ebelucinezela, oluza kuyigcina iminyaka embalwa.
Kodwa ayisi malunga nokwenza imisebenzi emitsha…. nangona banokubhaptiza ngelinye lala magama ayiliweyo akhokelela wonke umntu ukuba acinge ukuba umbono ngowabo. Izikrini ze-SmartBlack iOLED RetinaX2 (isisombululo se- «retina», esingeyonto engaphezu kwe-1280 * 720 pixels, isetyenziswa kuphela yi-Apple kunye nesiphelo esisezantsi esiphantsi).
UTim Cook uthe emva nje kokubhubha kukaJobs ukuba abalandeli beApple mabangazikhathazi ngekamva lenkampani, ukuba ngaphambi kokushiya "wayeshiye ifriji igcwele kakuhle" ngezimvo ekufuneka ziphuhlisiwe. Kancinci. Kwiidosi ezincinci, ukucudisa "uphuculo" ngalunye kakuhle ngaphambi kokumilisela okulandelayo.
Ngokucacileyo bekungekho zimbono zininzi kangaka. Okanye mhlawumbi ezo zimvo zoko azilungelanga kwimarike ngokukhawuleza njengezixhobo eziphathwayo.
Ngokwazi kwam, i-iPad inesisombululo se-2048 x 1536…. Andazi ukuba usifumana phi ukuba basebenzise eso sisombululo se-iPads, yiyo le nto kuthethwa ngayo kwinqaku.
Kwaye ukuba uthetha nge-iPhone, ezi-4,7 zisebenzisa i-1.334 umphinda-phinde ngo-750 kunye no-1920 no-1080 × XNUMX ……
ke inyani, andikaziboni ezo 1280 × 720….
I-Apple isebenzisa isisombululo se-2048 × 1536 kwii-iPads, yile nto kuthethwa ngayo kwinqaku.
Ukuba uthetha nge-iPhone, sebenzisa i-1344 × 750 kwi-4,7 ″ kunye ne-1920 × 1080 ngokudibanisa.
Andazi ukuba usifumana phi eso sisombululo, kodwa kuyacaca ukuba iApple ayisisebenzisi kwiimveliso zayo.
USony uxele ukuba kulo nyaka uzayo siza kubona imidlalo yePlayStation kwi-iOS
Amacala eNkundla ePhakamileyo kunye ne-Samsung kwimfazwe yelungelo elilodwa lomenzi kunye no-Apple